Safal Khabar - विद्युत महसुल नतिर्नेले ठूला कुरा गर्ने ?
आइतबार, ०१ असार २०७६ (Sunday, 16 June, 2019)
विद्युत महसुल नतिर्नेले ठूला कुरा गर्ने ?
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको दस अर्ब उठ्न बाँकी
मङ्गलबार, २६ चैत २०७५, १४ : ३४
काठमाडौँ । सिमरा वितरण केन्द्रले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली उपभोग गरेका पाँच वटा उद्योगलाई महसुल बुझाउन पत्राचार ग¥यो, तर ती उद्योगले महसुल नतिर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धम्कीपूर्ण शैलीमा लाइन काटेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
सिमरा वितरण केन्द्र अन्तर्गत तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ । त्यसमा साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल्स उद्योगले मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी छ । हुलास स्टिल्स, हामा आइरन एण्ड स्टिल्स, अशोक स्टिल्स र सूर्य नेपालको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठ्न बाँकी छ । हामाका मालिक बीके श्रेष्ठ हुन् भने हुलासका मालिक शेखर गोल्छा । जो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नाममा राजनीति समेत गरिरहेका छन् ।
यस्तै सौरभ समूहका विष्णु न्यौपाने, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका, अहिले होङ्सी सिमेन्टका मुख्य व्यक्ति सतिस मोर लगायतका उद्योगीले पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेपनि महसुल बुझाएका छैनन् । उनीहरुले महसुल नतिर्न अनेकन तिक्डम गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार बारा र पर्साको औद्योगिक करिडोर, हेटौंडा, विराटनगर र भैरहवा औद्योगिक करिडोरकै करिब दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ को बिजुली प्रयोग गरे वापतको महसुल उठन बाँकी रहेको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ साल माघमा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट २० घण्टाभन्दा बढी समय बिजुली उपभोग गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानले नियमित शुल्कभन्दा डेढ गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्राधिकरणको महसुल नबुझाउनेमा अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल्स, अरिहन्त जुट मिल, आरती स्टिल्स, स्पिनिङ्ग मल लगायतका छन् । प्राधिकरणले अर्बौँ रुपैयाँ उठाउन पत्राचार गरेपछि उद्योगी व्यवसायी निहुँ खोजेर बसेका छन् । उद्योगीहरुले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि प्राधिकरणले मंगलबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सेटिङ्गमा उक्त मुद्दा मिलाउन सकिने भन्दै व्यापारीले चलखेल सुरु गरेका छन् ।
प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले २०७३ भदौदेखि २०७५ साल फागुनसम्मको ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट उठेको महसुललाई छुट बिलमा राखेर बिलिङ्ग गरिएको छ । यदि सो सुरुदेखि नै उठाएको भए प्राधिकरणले ब्याजबाट मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्ने अवस्था थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगको निर्देशनभन्दा पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार नै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले स्थानीय सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर उद्योगमा लाइन सप्लाई गरिदिएको छ । एउटा लाइनमा समस्या आउँदा अर्कोबाट लाइनबाट विद्युत् दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । ‘ट्रंक लाइन’ भनेको चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने मेनलाइनबाट सिधै उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सफर्मर राखेर बिजुली दिने प्रणाली हो । तर उद्योगीले त्यस्तो सुविधा पाएपनि राज्यलाई ठगी गर्न उनीहरु लागिपरेको देखिन्छ ।
कसले कति तिर्न बाँकी ?
साहिल अग्रवालको स्वामित्व रहेको जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने छ । तर, उनी उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन मार्फत उक्त रकम मिनाह गर्ने सेटिङमा छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको स्वामित्व रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४२ करोड महशुल बुझाउन बाँकी छ । उनी पनि महशुल बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्व अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका पुत्र प्रवलजंग पाण्डेको स्वामित्व रहेको कसमस सिमेन्ट जनकपुरले १३ करोड बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् ।
दाङ घोराहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । बालकृष्ण श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको हामा आईरनले ९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । अशोक स्टिलले २३ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । सुर्य नेपालले ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । हुलाश स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ नबुझाउन अड्डि कसिरहेको छ । मिर्चैयास्थित विश्व गोयलको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । त्यस्तै धनुषा स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनु भन्दा जालझेलतिर लागिरहेको छ ।
दाङको घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ नबुझाई नेताको दैलो चहारिरहेको छ । रोल्पा सिमेन्टले ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । साहिल अग्रवालकै अर्को कम्पनि जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड नबुझाएर भागिरहेको छ । विशाल गू्रपका अनुज अग्रवालको त्रिवेणी स्पिनिङले ३० करोड रुपैयाँ महशुल बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । यो बक्यौता २०७५ फागुनसम्मको हो ।
सातै प्रदेशमा आज बजेट आउँदै
सात ओटै प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदैछ । ...
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र उद्योगबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगको सूत्रपात गर्न सम्भव छ : प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल...
अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी अमेजन विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान ब्राण्ड
गुगल र एप्पल कम्पनीलाई पछि पार्दै अमेरिकी...
के तपाइँलाई थाहा छ करछुटको यो व्यवस्थाबारे ?
सरकारले कर लिनेमात्र होइन, केही व्यवस्था करछुटको...
मोदीको आडमा बस्नेतले खेदे कुलमान घिसिङलाई
१. सुमन राव बनिन मिस इन्डिया
२. बुद्धिले काम गरे बुद्धिमानी, मनले काम गरे मनोमानी
३. अत्याधिक गर्मी बढेपछि विद्यालय बन्द
४. पेट्रोल खन्याएर महिला पुलिसलाई जिउँदै जलाइयो
५. मेघ गर्जन तथा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना
६. सांसद गगन थापाको प्रश्न : जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा के ?
७. २२ दिनदेखि एक बालक बेपत्ता
८. गुठीयारका माग सम्बोधन गर्न सकिने सत्तापक्षका सांसदको भनाइ
९. कथा : ‍गँगटाको चाल
३. मोदीको आडमा बस्नेतले खेदे कुलमान घिसिङलाई
४. त्यो दिन किन बाझे माधव नेपाल र ओली ?
५. समाजवादी पार्टीमा धार : सरकारका विषयमा देखियो विवाद
६. स्कुटरबाट झरेर नारायणीमा हाम फालिन युवती
७. लासमाथि कु दृष्टि लगाउँदै देवघाट क्षेत्र विकास समिति, देवघाट घिनलाग्दो घाटमा परिणत हुँदै